Kana iwe usingakwanise kuenda kuNorway, PBS inounza Norway kwauri
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Norway Kuputsa Nhau » Kana iwe usingakwanise kuenda kuNorway, PBS inounza Norway kwauri
tsika nemagariro • nhau • Norway Kuputsa Nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Trending Now • Akasiyana Nhau
by Dr. Anton Anderssen - akakosha kune eTN
rakanyorwa Dr. Anton Anderssen - akakosha kune eTN
Nhasi, Chivabvu 17, izororo guru renyika muNorway. Mumwe anogona kuti zvakafanana nechina waChikunguru muUnited States.
Sezvo isu tisingakwanise kuenda kuNorway nekuda kwekurambidzwa nedenda, PBS yaunza Norway kwatiri.
TV nhepfenyuro yeAtlantic Crossing inomiririra makore apo Nazi Germany yakatora Norway, uye mhuri yehumambo yakatizira kuEngland nekuUnited States.
Mumhanzi mune akateedzana akanaka naRaymond Enoksen anozvarwa kuNorway achinyora zvibodzwa.
Musi wa17 Chivabvu kupemberera Bumbiro reNorway, iro rakasainwa muEidsvoll musi wa17 Chivabvu 1814. Bumbiro rakazivisa kuti Norway inyika yakazvimirira. Panguva iyoyo, Norway yaive mumubatanidzwa neSweden - ichiteera yemakore mazana mana kubatana neDenmark. Kusiyana neUnited States, zororo ravo repasirese haripindirani ne "kuberekwa" kweNorway, sezvo Norway yaive iine humambo kweanoda kusvika makore chiuru gore ra400 risati rasvika. Harald I "Haarfagri" aive Mambo wekutanga weNorway, akapfekedzwa korona munenge muna 1,000, uye iye ndiye rakananga ropa rangu tateguru. Mumakore 1814 apfuura, Norway yakawedzerwa nenyika dzakasiyana, seSweden, Denmark, neNazi Germany.
kubva hatigone kuenda kuNorway nekuda kwezvirambidzo zvehosha, PBS yaunza Norway kwatiri. Nhepfenyuro yeterevhizheni yeAtlantic Crossing inomiririra makore apo Nazi Germany yakatora Norway, uye mhuri yehumambo yakatizira kuEngland nekuUnited States. Basa iri muHondo Yenyika II rakatanga musi waApril 9, 1940 uye rakatora makore mashanu. Munguva iyi, King Haakan VII uye Crown Prince Olav vaigara nehama yavo George VI, Mambo weUnited Kingdom. Princess Märtha weSweden, akabatana naCrown Prince Olav weNorway, akaenda kunogara kuAmerica, naFranklin D. Roosevelt, asati amuwana iye DC kumusha.
Ini ndinoda kuteerera kune mavara ari muPBS akateedzana. Mambo Haakan VII vanotaura chiDanish muchiratidziro, Crown Prince Olav anotaura chimiro chekare cheNorway, uye Princess Märtha vanotaura nezve 70 muzana yechiSweden, uye makumi matatu muzana kuchinjika kwenzwi reNorway, aine mazwi akajairika kuNorway futi.
Mumhanzi mune akateedzana wakanaka. Raymond Enoksen akaberekerwa kuNorway akanyora zvibodzwa zveAlantic Crossing.
Akandiudza kuti: “Kubva kumhuri yemimhanzi, ndakatanga nekuimba nekuimba uye nezvimwe zviridzwa, asi ndakatanga kudanana nepiyano uye kunyanya ma synthesizers pazera remakore gumi nemapfumbamwe, pandakatanga kosi yangu yekutanga, mushure mekuzvitamba ndega kubvira zera 9. Pandakangodzidza kuverenga mimhanzi pazera remakore gumi nemapfumbamwe, ndakatanga kuinyora. Ini ndaizounza zvangu zvinyorwa zvangu kuzvidzidzo zvangu. Ndakahwina mubairo wechidiki tarenda mukuumbwa neTrondheim Symphonic Orchestra muna 5 uye ndakanyora makumi maviri mibairo-yekuhwina mibairo. Atlantic Crossing yakasarudzwa yeMhanzi yakanakisa paCannes dzakateedzana muna 9. Iyi zvibodzwa zveAtlantic Crossing yakanyanya kushushikana uye ine thematic kupfuura avhareji yeScandinavia maitiro. Zvibodzwa zvangu zveThale (sarudzo yepamutemo pamutambo wefirimu weToronto muna2005) yaive yakawanda musika yeScandinavia. Iwo mamakisi eAtlantic Crossing anosanganisa chikoro chekare (chiAmerican) chemusoro mukuru orchestral mutauro nekushandisa kwakanyanya kwenzwi uye piyano yeScandinavia maitiro. Ini ndakajairwa kudzidziswa muEuropean post-war yazvino maitiro, uye izvo zviri kure kure neesesthetics yandinoshanda nayo nhasi. "'Kuti tigare kana kuti tinofanira kuenda' dialog pakati peCrown Prince Olav naMambo ndiyo yaive nzvimbo yakaoma kunwisa nekuda kwekuchinja kwese kudiki uye manzwiro emanzwiro."
Dr. Anton Anderssen - akakosha kune eTN
Ini ndiri anthropologist wepamutemo. Yangu doctorate iri mumutemo, uye yangu post-doctorate graduate degree iri mutsika anthropology.